Ugu weyn Waraabka
Shuruuda uu beeralaydu maanta ka hawl galo ayaa ah mid ay ku dheehan tahay arrimo halis ah, qaar badan oo ka mid ahna aan lagu xakamayn karin wax xakameyn ah: isbeddelada cimilada, isbeddelada sicirka alaabada beeraha, arrimaha sharciga deegaanka ee la xiriira xuquuqda dhulka iyo xuquuqda isticmaalka biyaha, kharashaadka soosaarka, iwm. qoyaanka beeraha ayaa dhowaan dhibaato deg deg ah ku noqday dhulal badan oo Ruush ah. Dhirta aan u dulqaadan abaarta ayaa khatar weyn ku sugan. Dalagga mustaqbalka waa la weerarayaa. Waa suurta gal in la xakameeyo khatarahaas oo aan lagu tiirsaneyn walxaha dabiiciga ah haddii nidaamyada waraabka ee miinooyinka lagu rakibay.
Warshadaha '' Valmont Industries 'waa hormuud caalami ah nidaamyada waraabka beeraha. Dunida oo dhan, shirkaddu waxay shaqaalaysaa inka badan 10 oo shaqaale. Badeecadaha summadaysan ee 'Valmont Valley' waxaa si weyn looga aqoonsan yahay adduunka oo dhan inay yihiin teknolojiyad sare, la isku halleyn karo lagana soo saari karo waraabka. Hoggaankan waxaa lagu xaqiijiyey rakibida in kabadan 000 nidaamyo kala duwan oo dooxada oo adduunka ah. Valmont waa horudhaca nidaamyada waraabka ee kordhiya wax-soo-saarka iyo u adeegsiga ilo biyo yar yar si xikmad leh.
1954. - wuxuu patent ka soo qaatay Frank Zybak soo saarista nidaamyada waraabka udubdhexaadka ah.
1964-69gg. - warshaddii ugu horreysay ee Dooxada waxaa laga iibiyay dibedda, Faransiiska. Soo-saarista Dooxada waxaa loo beddelay Valmont Industries, Inc. Habka galvanizing kulul-maquufin ah ayaa la soo saaray, oo bixinaya ilaalinta daxalka muddada-dheer.
1969-74gg. - waxay soo saartay gearbox u gaar ah, taayirro caag ah ayaa loo isticmaalay nidaamyada.
1974-79g. - waxaa la soo saaray nidaam waraab koone ah, kaas oo u oggolaanaya beeralayda in ay daboolaan aag dheeri ah oo ku saabsan dhinacyada qaabab kala duwan. Waxaa la diyaariyey nidaam waraab oo awood u leh inuu cutubka ka raro hal goob oo uu u wareego mid kale, sidoo kale waxaa loo raacayaa habka waraabka beeraha yar yar.
1979-84g. - soo bandhigida looxyada leh kontoroolka fog, rusheeyaha ku shaqeeya cadaadis hoose ayaa la sameeyay.
1986. - qalab loogu talagay jadwalka fog ee waraabka iyadoo la adeegsanayo kumbuyuutar ayaa la sameeyay.
1989-94g. - Xakamaynta Dooxooyinka Dooxada Pro iyo Koontaroolada Dooxada Saldhigyada Saldhigyada waxay kuu ogolaanayaan inaad kordhiso xakamaynta nidaamyada udubdhexaadka ah, oo ay kujirto adeegsiga marinka fog ee xafiiska.
1994-99g. - taxanaha 8000th waxaa la soo saaray wax soo saar, oo ay ku jiraan taako dherer kala duwan leh.
1999-2004g. Soo bandhigida taleefannada gacanta waxay furtay awoodda lagu maareeyo rakibidda meel kasta oo adduunka ah.
Ku dhawaad ​​60 sano, Valmont waxay naqshadeyneysay oo soo saartay nidaamyo waraab oo tayadeedu sareyso waxayna door hoggaamineed ku leedahay suuqa, iyagoo soo bandhigaya qaababka waraabka ee ugu horumarsan uguna habboon ee buuxiya dhammaan shuruudaha casriga ah.
Qalabka waraabka dooxada waxay u adkeysan karaan culeysyada maalinlaha ah ee shaqada iyadoo ay ugu mahadsan yihiin farsamooyinka adag iyo naqshada gu'ga waarta ee naqshaddeeda. Nidaamyada waraabku waxay ku dhaqaaqi karaan shuruudo badan oo kala duwan oo ay ku bixin karaan saad biyo oo sax ah; waxay leeyihiin kontaroolo fudud. Naqshadeynta ayaa baabi'isa xilliga deyrta. Qalabka waxaa bixiya ganacsato aqoon sare u leh, taas oo hubineysa in sifiican loo isticmaalo maalgashiga.
Rakibaadda waraabka hore
Dooxooyinka buufinta hore ee Dooxada (Jaantuska 1) waxay bixiyaan daboolida ugu badan ee dusha sare ee dhul laba jibbaaran ama afargeesle ah - illaa 98%. Intaas waxaa sii dheer, Unugyada Hore ee Dooxada waxay keydiyaan biyaha waxayna yareeyaan qulqulka qulqulka iyagoo yareeya isticmaalka biyaha. Dooxooyinka horay u-rusheeyaha ah waa aalado aad u qiimo badan oo beerashada ah: waxaa loo isticmaali karaa in lagu isticmaalo kiimikooyin iyo bacrimiyeyaal biyo waraab ah (Jaantus 2), biqilka iyo leaching. Valley waxay bixisaa gudbinta ugu kalsoonida badan iyo nidaamyada biyo bixinta, xulashada ugu balaaran ee taako, taayirro, bambooyin, kontaroolo iyo waxyaabo kale oo badan.
Nidaamyada waraabka hore ee dooxada dooxada waxay isticmaalaan qaybo badan oo isku mid ah oo la isku halleyn karo oo shaqeynaya iyo kulanno loo adeegsado nidaamyada waraabka wareega ee Dooxada. Midnimadooda, xooggooda iyo cimri dhererkoodaba waa la ogyahay.
Si kastaba ha noqotee, si ka duwan xiritaanka wareegga waraabka, rakibadaha hore ee dooxada hore ayey u socdaan oo gadaal u socdaan duurka oo dhan. Qaar ka mid ah rakibadaha hore ayaa sidoo kale la jiidi karaa ama la gayn karaa, iyadoo labalaabaysa dusha waraabka (Jaantus 3, 4).
Qalabka waraabka ee dhamaadka-hore wuxuu keydiyaa biyaha iyo tamarta kharashka ugu yar ee shaqaalaha wuxuuna ku haboon yahay beeraha laga bilaabo 4 ilaa 405 hektar oo leh foorar ilaa 6% ah.
Gawaarida hore waxaa lagu xukumaa iyaga oo gacan ka helaya fiilo aad u sarreysa, furrow ama fiilo jiidid dhulka hoostiisa ah, waxayna sidoo kale awood u leeyihiin in ay u leexiyaan qaraabo si ay u waraabiyaan beerta deriska ah. Bixinta biyaha waxaa lagu fuliyaa tuubada tuulada ama marinka.
Nidaamyada waraabka wareega
Dhamaan walxaha qaabdhismeedka wareegayaasha wareega (Jaantus 5, 6) Dooxada waxaa loo qaabeeyey, lagu farsameeyay oo la tijaabiyay iyadoo lagu saleynayo culeyska dhabta ah ee saameyn ku yeelan kara mashiinka inta howlgalka socdo, sidaa darteed waxaa lagu gartaa xoogga dhismayaasha oo kordhay, waxay hor istaagi karaan culeyska ugu sareeya sababa la'aanta ciladaha, jeexjeexyada iyo ballaaran. dherer dherer Qulqulka dooxada wuxuu gaarayaa dherer ah 30-66 m. Dhuunta tuubooyinka iyo masruufka taageeraya waxay bixiyaan xitaa qaybinta culeyska iyo xamuulka, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah dhulka aan sinnayn, sababtuna tahay meesha gaarka ah ee geeska.
Taageerada udub dhexaadka ah ee Dooxada Dhexe waxay bixisaa xoog iyo xasilooni iyadoo loo marayo nidaam lammaane. Dhul gariirka dheer, waxaa kuyaala kala goysyo kale oo rogrogmi kara. Burush qasab ah oo lala yeesho giraan alaabaha aruurinta wuxuu siinayaa awood lagu kalsoonaan karo gaadhiga khariidada. Si loogala shaqeeyo biyo dagaal badan, tuubbo kala duwan oo tuubooyin iyo godad leh tuubbo gudaha ah oo laga sameeyay polyetylen.
Sannadkii 1966, daaha kulul ee diirinta kulul ayaa markii ugu horreysay lagu soo saaray mashiinnada Dooxada. Markiiba waxay noqotay halbeeg warshadeed.
Nidaamyada Waraabka ee loo Adeegsan karo
Dooxada Dooxada Dooxada (Jaantus 7) waxaa lagu dhisay qaab dhismeedka birta ah ee dooxooyinka hogaaminaya iyo nidaamyada xakamaynta. Tababarku wuxuu xaqiijiyay in kuwani ay yihiin unugyada ugu dhaqaalaha-badan waraabka ee laga heli karo suuqa maanta. Adoo adeegsanaya rakibaad jiidan, waxaa macquul ah in la beddelo qaababka waraabka iyadoo dib loo qeybiyo meelaha waraabka ah sidaasna lagu dhimo qiimaha waraabka hal hektar. Dooxada Dooxada Dooxadu waxay fududeeyaan waraabka iyadoo ay dabacsanaanayaan berrinka iyagoo dhaqaale ahaan ku haray.
Khadka dooxada ee udub dhexaadka jiido waxaa ka mid ah afar ikhtiyaar oo xarummo taallo ah - 4-taayir leh oo jiidan toosan, 4-giraangiraha leh giraangiraha wareega, 2-giraangirta ama skid. Nidaamyada Waraabinta Dooxada Dooxada Dooxada Dooxada ah ee la isku halleyn karo ayaa fududeyneysa isla markaana qiimo jaban ku waraabinaysa beeraha min 2 ilaa 121 hektar. Nidaamyada Waraabinta Dooxada Dooxada leh ayaa looga wareegi karaa goob ka yar saacad wax ka yar!
Ilaha korantadu waa koronto dhaliyaha dibedda ama koronto.
Nidaamyada Waraabka Garka
Farshaxanka shaqaalaha Valmont ayaa suurta galiyay sanadkii 1974 in la abuuro wareega wareega wareega koowaad ee aduunka oo leh garab garabka (Jaantus 8). Iyada oo gacan ka heleysa garabka koontoroolka leh ee la xakameeyay, waxaa suurtagal ah in lagu waraabiyo beero leh qaab kasta oo leh saxnaan weyn. Mashiinnada waraabka xagalku waxay leeyihiin dherer ahaan 62 m (87 m oo leh qalabka loo yaqaan 'console).
Isku halaynta isku xirnaanta garabka jaranjarada waxaa lagu hubiyaa isku-shaandheyn ballaaran, oo siisa xasilloonida mashiinka markii aad ka shaqeyneyso dhul aan sinneyn. Biyo-waraabinta saxda ah, beddelidda iyo wareejinta beddelidaha kasta ayaa la xakameynayaa.
Raacitaanka calaamadaha, anteenooyinka tooska iyo tooska ah ee toosan ayaa xaqiijinaya saxsanaanta nidaamyada waraabka ee labada jiho.
Garbaha geeska waa la hagaajin karaa iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 'Compu-Spray'. Xaglo la beddeli karo iyo heerka socodka biyaha, iyada oo la raacayo cadaadiska jira, la kordhiyo isku-ekaanshaha waraabka.
Mashiinka quudinta joogtada ahi wuxuu si siman u qaybiyaa kiimikooyinka iyo bacriminta la dalbaday.
Guddiyada kontaroolada si fudud loo isticmaalo ee leh wareejinta dhagaxa ayaa u oggolaanaya hawlwadeenka inuu si madax-bannaan, isaga oo aan wicin adeegga farsamada, dib u soo celiyo mashiinka kadib joogsiga degdegga ah.
Mashiinnada garoonka yar
Naqshadeynta yar yar ee dooxada waxay ku habboon yihiin beeraha yaryar halkaas oo berrinku u baahan yahay saxnaan sare, laakiin kaabayaasha iyo cabirka dhulku wuxuu ku xaddidan yahay keenista xarumo waaweyn. Xalka ugufiican ee xaaladdan waa Mashiinnada Dooxada Dooxada. Uma baahna dayactir aad u badan oo way fududahay in la isticmaalo.
Marka lagu daro mashiinnada korantada, Dooxada waxay hadda bixisaa xirmooyin si sahlan looga shaqeyn karo oo leh matoorada hydraulic ama matoorrada gaaska.
Doorasho wanaagsan oo loogu talagalay beeraleyda ka shaqeeya beeraha yaryar. Spinner (Jaantus 9) wuxuu ku waraabin karaa aagagga min hal ilaa saddex hektar waxaana loo isticmaali karaa meelaha helitaankoodu kooban yahay ee korantada.
Hal-ku-wareegga wareeggaan wareegga ah waxaa wadata cadaadis biyo waxaana lagu rakibi karaa si joogto ah ama jiidista duurka ilaa duurka.
Dabeecada kaligiis ah oo mishiin leh (Sawir 10)
Sida Spinner-ka, Mashiinkani waa ikhtiyaar kale oo loogu talagalay aagagga ay ku yar yihiin helitaanka koronto. Waxaa ku shaqeynaya mashiinka shidaalka shidaalka, wuxuu noqon karaa mid taagan ama jiida, wuxuu ubaahan yahay cadaadis biyo oo hooseeya wuxuuna kufiican yahay beeraha hal ilaa seddex hektar.
Dooxada Ruushka - shabakad ganacsade xoog leh iyo taageero macaamiil lagu kalsoon yahay
Nidaamyada waraabka dooxada waxaa lagu qaybiyaa Ruushka iyada oo loo marayo shabakad ganacsade ballaaran. La shaqeynta macmiilku waa shaqsi waxaana ku jira takhasus gaar ah (wakiilka ganacsadaha) booqashada beerta, oo cabbira xuduudaha berrinka isagoo tixgelinaya suurtagalnimada rakibida mashiinka waraabka dooxada, doorta xaddiga lagama maarmaanka u ah daadinta biyaha maalin kasta, waxay go'aamisaa goobta lagu rito saldhigyada iyagoo xisaabta ku daraya meesha biyaha laga helo.
Shaqada ka dib, macluumaadka la helo waa la socodsiinayaa mashruucanna waxaa lagu fulinayaa qaban qaabinta mashiinno, dhuumaha iyo matoorrada matoorka garoonka. Qorshahan ayaa loo qaabeeyey iyada oo la tixgalinayo kor u qaadida dhulka iyo arrimo kale oo badan.
Goobta matoorrada ee mashiinnada saydhista ayaa lagu xushay iyadoo loo eegayo tirada biyaha iyo cadaadiska loo baahan yahay. Guuldarrooyinka cadaadiska dhuumaha ayaa la yareeyaa iyadoo la xusho dhexroorka dhuumaha. Nidaamka waxaa ka mid ah alwaaxyo loogu talagalay in biyo loo dhaansado xilliga qaboobaha, hubi baalka si looga hortago dillaaca biyaha ee nidaamka iyo nidaamka hawo-baxa.
Shaqo naqshadeyn la mid ah oo loogu talagalay nidaamyada waraabka dooxada waxaa lagu fuliyaa beerta kasta si bilaash ah. Si nidaamka waraabku u shaqeeyo sida ugu waxtarka badan ee suurtagalka ah, xulashada ugu wax soosaarka iyo qiimaha waxtarka leh ayaa la soo jeedinayaa.
Tartanka noocyada guryaha ee baradho iyo khudradda tafaariiqda
Baradhadu - 2012: natiijooyinka bandhigga
Dib-u-habeyn ballaaran EVO 280
Baradhada - 2012: natiijooyinka bandhig
Ruushka ee WTO - isbeddelada ganacsiga